Abantu abaningi, imfundamakhwela ikakhulukazi abasebenzisi computer wake kangaka ngengozi ususe amafayela ezidingekayo, amafolda ngisho kubhasikidi kusukela kudeskithophu. Bese kunenkinga, indlela ukubuyisela kubhasikidi namafolda?
Buyela kubhasikidi lephakeme uma sebangena emsebentini silula, futhi kuthatha isenzo + ngampela ingu-umzuzu. Noma kunjalo, abasebenzisi ongenalwazi ngokuvamile abazi ukuthi ukubuyisela kubhasikidi, futhi aqale ukufuna ukwaziswa okukuyi-Internet. Futhi kungenziwa ngezindlela ezimbili - ngokusebenzisa control panel noma kudeskithophu.
Indlela ukubuyisela kubhasikidi ngokusebenzisa Desk? Ukuze wenze lokhu, chofoza ngakwesokudla kudeskithophu kanye ohlwini okuholela, khetha "Ukwenza okuthandwa nguwe" sigaba. Ohlwini esinxeleni sewindi esivula chofoza emgqeni "Shintsha Icon", ukubeka umkhaza eduze kwento "Basket". ngokuchofoza Kwesokunxele ngezansi kwi "Sebenzisa" futhi «OK». Udoti isithonjana bayobuyela kudeskithophu.
Indlela ukubuyisela kubhasikidi ngokusebenzisa Control Panel? Cindezela "Qala" bese "Control Panel" futhi "Ukubukeka." Lokhu kuvula ifasitela lapho udinga ukuthola "Ukwenza okuthandwa nguwe" sigaba. Qhubeka isebenze njengoba kudeskithophu.
Buyisela ifayela kusuka Recycle Bin
Umsebenzisi ngamunye kuye kwaba namacala ukususwa ngephutha amafayela. Kungenzeka yini ukuba umuntu alulame amafayela asusiwe namafolda? Okokuqala udinga ukuhlola ubhasikidi - mhlawumbe amafayela akhona. Buyisela kusuka kudoti - akukho lutho okungathenjelwa kulo lula. Ukuze wenze lokhu, vula ngobhasikidi ukuthola ifayela kusulwe, khetha ke, ukukwenza ngokuchofoza kwesokudla uhlu lehla ukhethe "Buyisela". Into bayobuyiselwa endaweni eya kuyo isusiwe.
Buyisela ifayela, uma kubhasikidi kususwa
Ngandlela-thile ngaphezulu nzima ukubuyela ifayela, uma kubhasikidi kususwa. Buyisela ifolda emva aziqede Recycle Bin, ungasebenzisa isofthiwe ekhethekile ukuze afakwe kuyi-computer.
Sicela uqaphele ukuthi ngemva kokususa ifayela lisuswa kusuka Recycle Bin igama lakhe kuphela futhi ifayela uqobo uhlala kwi drive kanzima, kodwa kuphela kuze kube phezulu it is hhayi ebhaliwe entsha. Ukuze ukuthola amafayela ngaphandle amagama, udinga isimiso esikhethekile. Kuyi-Internet ungathola izicelo mahhala futhi kukhokhelwe yokutakula ifayela. Lapho ukulanda uhlelo ayikwazi egcinwe kudrayivu efanayo lapho ifolda ofuna ukubuyisela. Kungenjalo, amafayela Uhlelo kungase isula amafolda elahlekile, bese bakwazi ingabuyiselwa.
Uhlelo sinjalo khulula Recuva, inguqulo yakamuva ye-okuyinto lula ukuthola ku-inthanethi futhi thwebula. Bese download lolu hlelo ukufaka kukhompyutha yakho ngokulandela kukuphi ilula futhi icacile. Phakathi ukufakwa, kubalulekile ukuba singakhohlwa ukuthi azikwazi ukufakwa kwi drive efanayo lapho amafayela ofiselekayo. Uma folda lost on drive C, kufanele ushintshe ku ukufakwa endleleni wefayela, njengoba ngokwakhona, zonke izinhlelo uyifakile kudiski.
Kanye ezifakiwe bese uchofoza elithi "Qeda" ku wizadi yokutakula luyavela kwideskithophu. It uzocelwa ucacise uhlobo lwefayela kokuba ezikhokhiwe: dokhumenti, umculo, amavidiyo kanye nezinye. Kufanele kuqashelwe uhlobo ukuya esikrinini esilandelayo lapho udinga ukumaka indawo ifayela indawo ngokukhetha eempendulweni. Ngemva Ngokuchofoza "Okulandelayo" Uhlelo izonikela uqale ukucinga. Udinga ubeka luphawu "Okuthuthukisiwe Ukucinga" bese ucindezela "Qala".
Kusukela disk ikhompyutha namandla ivolumu kuzoncika isikhathi search, okungase kuhlale iminyaka ngaphezu kwamaminithi kweshumi. Ngemva kwalokho, lolu hlelo luyoba ukubonisa uhlu lwamafayela ukuthi ingabuyiswa. Ufuna ukuthola phakathi kwawo ifayela elahlekile, wammisela isheke eduze bese uchofoza "Buyisela". Iseluleki yenza ukuba ukhethe ifolda lapho ufuna ukubeka idokhumenti walulama noma isithombe. Ngemva imizuzwana embalwa, ifayela izobuyiselwa computer.
Uma esikhundleni ifayela oyifunayo itholakala eliqoshwe umbhalo othi "Akukho ukubuka kuqala Iyatholakala" - okusho ukuthi phezu kwalo kukhona irekhodi elisha futhi ngeke ibuyiselwe.
Uhlelo inikeza kwathatha esimweni esisimeme. Kulokhu, uhlu izovela etafuleni, futhi uzokwazi ukubona okuqukethwe amafayela.
Salads Original "Mivina"
Ceiling emoyeni-conditioner. Ukufakwa nokugcinwa esimweni esihle emoyeni isimo
Kanjani ukufundisa wekati kumuntu yangasese?